Vaovao - Ny fahasamihafana misy eo amin'ny motera vibration sy ny motera mahazatra
Ny motera mihetsiketsika dia miaraka amina andian-tsoratra eccentric azo ovaina amin'ny tendrony roa amin'ny zotra rotor, ary ny herin'ny fientanam-po dia azo avy amin'ny hery afovoany vokarin'ny fihodinan'ny haingam-pandeha sy ny sakana eccentric. Ny halehiben'ny fihodinan'ny motera mihetsiketsika dia lehibe, ary ny feon'ny mekanika dia tsy azo ahena raha tsy mifanaraka tsara ny herin'ny fientanam-po sy ny herinaratra. Misy enina fanasokajiana motera hovitrovitra arakaraka ny fomba fanombohana sy fiasa ary ny hafainganam-pandeha.
Ny motera mahazatra mahazatra fantatra amin'ny anarana hoe "motera" dia manondro fitaovana elektromagnetika izay mahatsapa ny fiovam-po na ny fandefasana angovo herinaratra araka ny lalàn'ny fampidirana elektromagnetika. Ny motera dia solontenan'ny litera M ao amin'ny faritra (ny fenitra taloha dia D). Ny asany lehibe indrindra dia ny famokarana herinaratra mitondra fiara. Amin'ny maha loharano herinaratra ho an'ny fitaovana elektrika na milina isan-karazany, ny litera G dia solontenan'ny tariby G. Ny anjara asany lehibe indrindra dia ny anjara asa fanovana ny angovo mekanika ho angovo elektrika.
Inona no maha samy hafa ny môtô vibration sy ny motera mahazatra?
Ny firafitry ny motera hovitrovitra dia mitovy amin'ny an'ny maotera mahazatra. Ny tena maha samy hafa azy dia ny motera hovitrovitra dia miaraka amina andian-tsoratra eccentric azo ovaina amin'ny tendrony roa amin'ny vatan'ny rotor, ary ny herin'ny fientanam-po dia azo avy amin'ny hery afovoany ateraky ny fihodinan'ny haingam-pandeha sy ny sakana eccentric. Ny motera vibration dia mitaky fahaizan'ny anti-vibration azo itokisana amin'ny lafiny mekanika sy elektrika fa tsy maotera mahazatra. Ny vatan'ny mpitaingina motera iray mihetsiketsika manana haavon'ny herinaratra mitovy dia matevina kokoa noho ny an'ny maotera tsotra mitovy haavo aminy.
Raha ny marina, rehefa novokarina ny motera hovitrovitra dia tsy mitovy amin'ny an'ny maotera mahazatra ny fahazoana mifampitohy eo anelanelan'ny vatan-kazo sy ny mitondra azy. Ny zana-kazo sy ny mitondra ny maotera tsotra dia tokony hifanaraka akaiky, ary ny fahazoana mifanentana eo anelanelan'ny zana-kazo sy ny fitondra ao anaty motera dia mihetsiketsika. Misy elanelana 0.01-0.015mm. Mazava ho azy, ho tsapanao fa hihetsika havia sy havanana ilay hazo-motera mandritra ny fikojakojana azy. Raha ny marina, manana ny anjara toerany lehibe io fahazoan-dàlana io.